Ụcha - Ntughari Ụkwụ, Embroidery Thread
MH na-achọ inye ndị ahịa ahịa agba agba na ụwa. N'iji site n'ọbá akwụkwọ mara mma nke nwere ihe karịrị 10,000 shades, kaadi Mh na-enye nhọrọ nchekwa 400, Mh na-enyekwa nzaghachi ngwa ngwa maka mmepụta mmepụta nchara na-agba ọsọ, na-agbanwe agbanwe mgbe niile.
Iji nyere aka n'ịkọwa ọdịiche dị iche iche na agba, ndị ọkachamara malitere usoro nhazi ụcha. Igosipụta agba ọ bụla na ọnọdụ site na agba oghere, anyị nwere ike iji ezigbo nọmba iji tụọ ọdịiche dị n'etiti agba. E nwere ọtụtụ ebe oghere dị.
Uru nke ụcha ihe
Na mgbakwunye na imeghata agba nke ihe n'ime ezigbo ọnụ ọgụgụ dị iche iche dị na nha ụcha, ọ na-enye aka ịnọgide na-agbanwe agbanwe agbanwe agba, na-akwado ụda nha na agba nkwurịta okwu. Nkwado zuru ụwa ọnụ n'ahịa ngwaahịa na-ere ákwà ga-enwe ike ịme nkwurịta okwu ngwa ngwa na usoro agba na ụkpụrụ gburugburu ụwa. Site na onu ogugu, enwere ike ighaputa data di otua ka obula choro ebe di nma.